heerka 69 - Butros Rescue Saga
In heerkan aad xilsaaray keeno afar xayawaan guri si hoose ee badbaadinta iyo si ay u helaan 20 000 dhibcood, marka laga reebo heerka ay tani tahay si xeelad in lagu siiyo lix xayawaanka guriga si ay ula shaqeeyaan, murugo laakiin run, waxaad tagi karaan laba off waydaarto, oo weli ka sameeyaan!
Sababtaas qaar blocks ee heerkan oo kaliya kor u siinin inuu sameeyo wax isku dar weyn ku darto, waxaa jira firecracker lahayn in lagu suuqa iyo saabsan wararka kaliya wanaagsan yahay ma jirto wax xad ah oo ku saabsan tirada dhaqaaqdo.
Sanduuqyada Birta, baqashada iyo dhagaxyada xira dari yar uunsigii ah in this curry hore u kulul, bambooyin ay yihiin xaaladaha muraayad u baahan jabiyo ka hor waxaad u isticmaali kartaa oo waa fikrad fiican (akhri sida 'fikrad weyn, kaliya waxaa qaban!') inay yareyso bambooyin aad u furan ka hor inta ibo-aad rocks..yeah sida aan helay this qabanayaan si qalad ah run ahaantii dejinaaya kartaa dabka!
Rid sanduuq bir ah ku wareegsan bambooyin inuu iyaga baabbi'iyo.
Haddii aad isku dayi kartaa in la soo ururiyo sanduuq bir ah ku wareegsan bam ah oo uu soo jebiyey furan, Taasi waxay ka caawinaysaa halaagi mar oo dhan. Habka kale oo laga yaabaa inaad awoodo inuu iyaga baabbi'iyo waa in ay iyaga ka tago hogaanka column ah oo ha uga soo dhicin sidii kitaab shaashadda, tani waxay noqon kartaa wax xeelad badan inkasta oo ay jiraan waxa astaan ​​u ah in la wax fuushan oo kaliya maadaama ay tani ku saabsan tahay in ay ka dhacaan…ama in aan kiiska markay dhacaan, Waxaan tuuro xayawaankaaga aad u badan off isku dayayaan in ay ka gudbaan heerka this!
Laakiin sida ciyaaraha oo dhan isreebreeb King waxa suurto gal ah! kaliya ujeedadoodu tahay si ay u abuuraan blocks midabka iyo dooran aad u dhaqaaqdo si caqli ah, xusuusan dhaqdhaqaaq kasta oo uu awgeeda, la fahmo sida ugu wanaagsan in la furo ilaa fursado badan ugu dambeyntii waa furaha ah inay kulankaan. Wax yar samir a, badan oo nasiib iyo heshiis weyn ee istiraatiijiyadda aad u yeelan doontaa in ay lowska baxay!
heerka 69, 10.0 out of 10 based on 1 rating
Filed Under: heerka 69, Uncategorized Tagged: I caawi, level 69